Mamboly ny tany - inona moa izany, ny fiheverana sy ny fiantraikany
Mamboly ny tany - inona ary izany, ary inona no tombony amin'ity fomba ity?
Ny iray amin'ireo fomba hiarovana ireo zavamaniry avy amin'ireo singa voajanahary ratsy dia ny fanangonam-bolo. Ny Mulch dia heverina ho mandrakotra ny tany akaikin'ny planeta fanangonam-bokatra. Ireo izay maniry ny hianatra momba ny fanolanana ny tany, ny maha-izy azy ary ny fomba fampiharana azy dia ilaina ny mamaky fampahalalana mahasoa momba ity lohahevitra ity.
Inona no zavamaniry mulching?
Mba hanomezana famaritana mazava tsara ny hoe inona izany, dia azo atao amin'ny fomba manaraka izany: ilay antsoina hoe toeram-pialokalofan'ny tany akaikin'ny zaridaina nambolena sy ny zaridaina an-jaridaina miaraka amina fitaovana izay mandalo rivotra sy rano tsara. Ity fomba fanodinana zavamaniry ity dia fantatry ny mpamboly efa ela. Maro no tsy nanandrana hampihatra izany amin'ny fampiharana, satria satria tsy mino ny fahombiazany izy ireo tamin'ny voalohany. Na izany aza, ireo mpamboly nampiasa an'io fomba io, dia resy lahatra ny vokany tsara amin'ny vokatry ny fijinjana. Misy mpamboly sasantsasany aza manana ny tsiambaratelony amin'ny fanaovana antsibe.
Ahoana no ahafahanao manangona ny tany?
Ny fitaovana entina manangona ny tany dia mety ho organika sy tsy ara-organika. Ireo solontenan'ny karazam-borona voalohany aorian'ny fotoana dia manomboka manjary, mamelona ny tany. Mankasitraka ny rafitry ny tany izy ireo. Ny famokarana fitaovam-pambolena voajanahary dia manova ny asan'ny tany, ka mila mampihatra azy ireo amin'ny fikarakarana rehetra.
Tselatra organika dia ahitana:
zaridaina sy komposta holatra;
ravina maina ary horohoron-tany;
Fanamboaran-javatra vita amin'ny hazo (pitranga, fanindronana, sns.);
karazana zavamaniry isan-karazany (tsimokaretina, legumes, felam-bidy, ary ny hafa).
Ny fitaovam-behivavy tsy ara-dalàna, ankoatra ny fikojakojana, dia misy ihany koa ny asan-jiolahy. Ireto misy ireto fitaovana manaraka ireto:
Raha oharina amin'ny karazam-bozaka hafa, ny fampiasana sawdust dia safidy ara-toekarena, fitaovana matanjaka amin'ny tontolo iainana. Ny fanontam-pirinty amin'ny sawdust kosa dia misy dikany tsy maintsy dinihina. Noho izany, ho an'ireo tanjona ireo dia ilaina ny manao pensée (tsy voatery hoe ny fahamamoana sy ny fahadiovana voalohany) ao amin'ny compost . Ny fotoana tsara indrindra amin'izany dia ny vanim-potoan'ny lohataona, noho izany dia mihodina haingana izy ireo.
Hanomana mulch avy amin'ny puce, ny ala maitso amin'ny ankapobeny, ny urea, ny lavenona ary ny rano dia ilaina. Azo atao ihany koa ny mampitovy ny mololo sy ny ahitra ary ny fako organika samihafa. Ny varimbazaha dia mifangaro amin'ny rano mandra-pamonoana tanteraka. Io vahaolana io dia manindry ny fanindrontsina ho an'ny mulching. Ny soso-kevitra hanampiana dolara amin'ny mulch. Noho izany, ny proteinina dia tsy hoe hiaro ny tany amin'ny anton-javatra ratsy voajanahary, fa hanetona azy koa amin'ny zavatra ilaina.
Mamoaka amin'ny mololo
Ny mololo toy ny arina ho an'ny tany dia azo ampiasaina na irery na miaraka amin'ny fitaovana hafa amin'ny karazana organika. Ny vokatra tsara dia ny fampiasana azy miaraka amin'ny compost na zay. Tahaka ny amin'ny fomba hafa rehetra hampiroboroboana ny tany, ny fantsom-panafody dia manana fiantraikany sy fiheverana. Ny iray amin'ireo fahadisoana iombonana amin'ny mpamboly dia ny miafina ny tany miaraka amin'ny mololo betsaka loatra. Noho izany antony izany dia mihodina ny ampahany ambany.
Ho an'ny tany tanimanga, dia asaina ampiasaina ny mololo voatoto. Mipetaka 2 cm ny halavany (tsy misy). Rehefa afaka adiny 2 herinandro ianao dia afaka manampy ampongabendanitra kely. Ny vokatra tsara dia manome molotra amin'ny mololo vita amin'ny diky. Io fitaovam-piasana io koa dia mety amin'ny kompostika amin'ny tontolon'ny môtô (fomba hafa). Ny dingan'ny fanodinana toy izany dia mifototra amin'ireto manaraka ireto: lozam-pifamoivoizana, diky, zana-ketsa marevaka. Izany rehetra izany dia mandrakotra ny faritry ny farafara voaomana. Mba hampiroboroboana ny fiantraikan'ny gonika dia matetika ny rano mulch.
Ny ahitra dia maina ho an'ny ampondra, tsy tsara ny vaovao. Ny fametavetana amin'ny ahitra dia vita amin'ny alahelon'ny alahelona sy ny rano. Ny tany dia tokony ho hafanain'ny masoandro, raha tsy izany dia mety hitaredretra ny fitomboan'ny zavamaniry eo ambanin'ny haavon'ny menaka. Ny haavony dia mirakitra eo amin'ny 5 hatramin'ny 5 cm eo ho eo. Mihamitombo tsikelikely izany, ary ilaina ny manondraka kely kely avy any ambony.
Mamoaka amin'ny vilany
Tsy toy ny molotra tsotra fotsiny ny fitoeran-tongotra, fa fitaovana maoderina kokoa, izay taratasy vita pirinty. Amin'ny alalan'izy ireo, dia tsy misy korontana intsony, ary na dia ny sobika aza dia mitazona ny fahamendrehana. Ny famakiana ny tany amin'ny alim-borona dia mamaha tanteraka ny tany, mamokatra ny tany ary manatsara ny rafitra. Raha tsy mandingana ny fitoeran-dabozia napetraka eo am-pandriana ianao, ary mandeha eny amin'ny lalana tsy misy azy, dia tsy azo tapahina sy ampiasaina amin'ny taona manaraka ireo fitaovana ireo.
Mulching amin'ny tavoahangy
Ny tavoahangy ho toy ny fitaovam-pitovozana dia toy ny fandroahana ireo sakafo avy amin'ny tany. Io fitaovana io dia misakana ny fivoaran'ny flora eo amin'ny zavamaniry. Tsy tokony hesorina eto am-pandriana ity mulch ity - miditra amin'ny tany ilay tavoahangy. Ny totozy moka amin'ny lohataona dia manome ny fepetra tsara indrindra hahazoana harona betsaka. Ny fampiasana ity fitaovana voajanahary voajanahary ity dia mampiroborobo ny fambolena haingana.
Ny fanosotra fanosotra na ny pine dia misy fingotra tsara. Ny soso-kevitra hanampiana ny fanjaitra mivantana amin'ny tany. Noho izany dia hihatsara ny kalitaon'ny tany lonaka. Ny fosirany amin'ny ilan-kesika dia mampitombo ny fihenan'ny tany. Mandritra izany fotoana izany, ity fitaovana ity dia manakana ny fivoaran'ny zavamaniry sasany. Avy amin'ny voatabia toy izany, ny kôkômbra, ny sahona dia miha-ratsy. Manolo-kevitra ny mampiasa ny fanjaitra miaraka amin'ny ahitra sy ala (mety ho mololo). Ny famolahana dia tokony hokoraina ao anatin'ny volana vitsivitsy.
Mambolena amin'ny baka hazo - fitsipika
Ny sombin-kazo amin'ny hazo aviavy ho an'ny molekiola dia mifanentana tsara amin'ny fananganana kirihitra maniry sy ny zaridaina an-tanety. Ny molekely toy izany dia mandalo tsara ary tsy mamela azy hitsiry. Noho ny fikojakojana ny fahantrana dia tsy maina ny fakan'ny zavamaniry. Tokony hotsarovana fa ny fampiasana sodina ho an'ny fanondranana ny tany dia manakana ny zavamaniry tsy hahazo aina sy phosphor. Noho izany dia ilaina ny famokarana ny tany amin'ny nitroka ary ny phosphorus dia mifantoka.
Ny mpamboly dia mandray ny fitsipika amin'ny fametrahana eo ambanin'ny molekiolaka toy izany ho an'ny saha iray hafa ahitra sy kitapo na taratasy matevina. Ny bozaka sy ny fiarovany tanteraka ny fandriana amin'ny tsimparifary, ary miaraka amin'ny fitaovana ampiasaina, dia mitombo ihany ny fiarovana. Mamboly tany amin'ny hodi-kazo dia asaina atao amin'ny fararano. Fitsipika hafa: tsy tokony hikasika ny sombin-kisoa na ny hazo io tovolahy io. Izany dia mety hahatonga ny cortex ho ritra mandritra ny vanin-taolana.
Matetika ny mpamboly tsy manana traikefa no te hahafantatra bebe kokoa momba ny fanangonam-bolo ny tany, inona no izy ary ahoana no fampiharana izany. Ny mahaliana an'io fomba io dia tsy mahagaga. Ny fambolena ny tany dia efa ela no nalaza noho ny fiantraikany teo aminy. Mihabetsaka ny fiatraikany ary mitombo ny fikarakarana ny fikarakarana, satria tsy mila rano matetika ny fampiasana menaka.
Stevia - mitombo amin'ny voa ao an-trano
Ahoana no atao rehefa manidina ny tongolo?
Afaka mikarakara karaoke ve aho mandritra ny fisafotofotoana?
Afangaro amin'ny pastèque - soritraretina sy fitsaboana
Ny fametrahana ny maitso ao anaty aterineto - inona no miafina miafina avy amin'ireo mpanamboatra antsika?
Sekoly Sekoly 2014
Jennifer Lawrence dia manahy an'i Darren Aronofsky amin'ny fifandraisana manokana amin'i Charlize Theron
Sakafo antoandro avy amin'ny legioma - recipe
Fiarovan-tratra ho an'ny vehivavy bevohoka
Trano ho an'ny efitra fandraisam-bahiny
Alkonost sy Sirin dia vorona fifaliana sy alahelo
Ny lokon'ny rindrina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny - iza moa ny alokaloka raha te hifidy?
Sakona vaky ho an'ny akanjo